मूल्यवृद्धि आकासिदै ! – नेपाली समाचारको स्रोत – bhandaforaviyan.com
| प्रकासित मिति : २६ चैत्र २०७७, बिहीबार ०५:३५
काठमाडौं/दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिएको छ। अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्ता खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। कोभिड १९ महामारीका कारण आयस्रोत गुमेर कमजोर बनेको क्रयशक्तिबीच नेपालीको भान्छा अचाक्ली महँगिएको छ। भटमास, सनफ्लावरको तेलसँगै चामल, केराउ, हरियो तरकारी, कुखुराको मासु, खाना पकाउने ग्यासको भाउ उच्च परिमाणमा बढेको छ। यस्तै, पेट्रोल र डिजेलको मूल्य पटक–पटक बढेको छ।
सरकारले इन्धनबापत विभिन्न शीर्षकमा असुल गर्ने करको दायरा घटाउन सकेको खण्डमा आम उपभोक्ताले केही सस्तो मूल्यमा इन्धन उपभोग गर्न सक्ने विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छापिएको छ।
दाऊन्नेमा दुर्घटना हुँदा ३१ जन घाईते। २६ चैत्र २०७७, बिहीबार ०५:३५
चितवनमा दुर्घटना बढ्दै: आज मात्र दुई दुर्घटनामा ७ को मृत्यु दर्जनौं घाईते। २६ चैत्र २०७७, बिहीबार ०५:३५
चितवनको भरतपुरमा म्याजिक आफै अनियन्त्रित भई खाल्डोमा खस्दा दुईको मृत्यु, ७ जना घाईते २६ चैत्र २०७७, बिहीबार ०५:३५
मूल्यवृद्धि आकासिदै ! २६ चैत्र २०७७, बिहीबार ०५:३५
अब दलालीमार्फत घरजग्गा कारोबारमा प्रतिबन्ध ! २६ चैत्र २०७७, बिहीबार ०५:३५
दिनहुँ हराउँछन् १० जना बालबालिका २६ चैत्र २०७७, बिहीबार ०५:३५
पटक पटक म्याद थपिएको ठिमुरामा निर्माणधीन पक्की पुल भत्कियो। २६ चैत्र २०७७, बिहीबार ०५:३५
विद्यालयलाई पोशाक सहितकाे सहयोग प्रदान। २६ चैत्र २०७७, बिहीबार ०५:३५
धोबीखोलामा हडपिएको २३ रोपनी सरकारी जग्गा एक महिनाभित्रै फिर्ता ल्याइने २६ चैत्र २०७७, बिहीबार ०५:३५
प्रेस चाैतारी र जनपत्रकार संगठन चितवन बीच पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा मिलेर जाने सहमति। २६ चैत्र २०७७, बिहीबार ०५:३५
यस बर्षको फागुपर्व तथा नयाँ बर्ष घरमानै बसेर मनाउन प्रशासनको आग्रह २६ चैत्र २०७७, बिहीबार ०५:३५
नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्रराज जोशीको निधन २६ चैत्र २०७७, बिहीबार ०५:३५